यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस कुन देशको कति ? – osnepal tv
काठमाडौं । आज बिहीबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मुल्य घटेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १११ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ।बहराईन दिनार एकको खरिददर २९३ रुपैयाँ ५१ पैसा, बिक्रिदर २९५ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ६२ पैसा, बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ २९ रुपैयाँ, बिक्रिदर ३६६ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रिदर १४१ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।
Previous article मसान मै सुत्ने र खाने अघोर बाबाले भगवानको शक्ती हुन्छ भनि ठोकुवा सहित यस्तो रहस्य बताए [हेर्नुहोस भिडियो]
Next article कांग्रेस नेतृत्वलाई खबरदारीः सशक्त भ्रातृ संगठनलाई निकम्मा बनाएर पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?
मसान मै सुत्ने र खाने अघोर बाबाले भगवानको शक्ती हुन्छ भनि ठोकुवा सहित यस्तो रहस्य बताए [हेर्नुहोस भिडियो]